Ciidamada Itobiya oo Dib u Galay Somaliya – Rasaasa News
Ciidamo Itobiyan ah oo aad u faro badan ayaa saaka [May19, 2009] soo buuxiyey deegaanka Kala-baydh gudaha Gobolka Hiiraan Somaliya.
Ciidamadan oo wata gawaadhida dagaalka oo qiyaastii sida la sheegay gaareysa ilaa iyo 18 ayaa waxaa halkaasi durbadiiba ay halkaasi ka sameysteen difaacyo iyaga oo wadada dheer ee laamiga ah ee aada Gobollada Dhexe isku baladhiyay baaritanana ka bilaabay.
Soo galista ciidamadaan ayaa ku beegmeysa xili dagaalo u dhaxeeya xoogaga Islaamiyiinta ay ka socdaan qeybo ka mid ah Gobolada Dhexe.
Imaatinkan ciidamada Itobiyanka ayaa la sheegay in ay ka dambeyso waa marka hore in ay iska difacayan Xogaga Al-shabaab oo isku baladhinaaya inta badan gobolada dalka iyo in ay iyagu ka cabsi qabaan in dagaaladan u dhaxeeyo Islaamiyiinta in ay saameeyaan dalkooda.
Ilaa hada lama garan karo sida xaalku noqon doono waxaana wararka dhinaca maamulka Maxkamadaha Islaamka ee G/Hiiraan ka soo baxaya ay sheegayaan in ay la dagaalami doonaan ciidamada Ethiopianka iyo cid walba oo amniga Gobolka wax u dhimeysa.
Dhanka kale waxaa cabsi xoogan ay ka jirtaa guud ahaan qeybo badan oo ka tirsan gudaha G/Hiiraan kadib markii sida la sheegay ciidamo faro badan oo ka tirsan ururka Al-shabab ay weerar ku soo yihiin Degmooyin ay maamulaan xoogaga Maxkamadaha Islaamka ee taabacsan Dowlada si ay u qabsadaan waxaana dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayaa Magaalada Beledweyne ee Xarunta G/Hiiraan.
Xoogaga Al-Shabab ayaa ku hanjabay in ay qabsandoonan dhamaan Gobolada Dalka ee Dowlada laga tageersanyahay waxaana 2dii maalmood ee ugu dambeysay gacan u gashay Degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay ee Gobolka Shabellaha Dhexe iyada oo hada cabsida ugu weyn ee jirta ay tahay in ay soo weeraraan Magaalada B/weyne.
Ciidamada Maamulka Maxkamadaha Islaamka ee G/Hiiraan ayaa heegan buuxo la galiyey iyadoona xilliyada habeenkii uu ka dhaqan galay gudaha Magaalada B/weyne bandow kaasoo sida la sheegay lagu sugayo amniga.
Goobihii lagu dagaalamay todobaadyadii ugu dambeeyay ee Gobolada Hiiraan iyo Galguduud ayaa hada degan laakinse waxaa la sheegay in cabsi ay jiro in mar kale halkaasi lagu dagaalamo.